RASMI: Lionel Messi Oo Ku Guulaystay Abaal Marinta Goolkii Abid Taariikhda Barcelona Ugu Fiicnaa, Fariinta Uu Jamaahiirta Kooxdiisa U Diray Iyo Goolka Sumcadan Ku Helay Oo La Shaaciyay. | Warmaalnews.com
Muddo bilo badan ah waxay Barcelona codka jamaahiirta kooxdeeda ku soo kala saaraysay sidii lagu heli heli lahaa goolka taariikhda kooxdeeda abid ugu fiican ee ku salaysan codka taageerayaasha waxayna ugu danbayn Barcelona si rasmi ah u shaacisay in Lionel Messi uu ku guulaystay goolka taariikhda ee Barcelona ugu fiicnaa.
Dhawaan ayay ahayd markii ay Barcelona shaacisay afarta gool ee codbixintii ugu danbaysay loo qaadayay, waxayna ahaayeen saddex gool oo uu Lionel Messi soo dhaliyay iyo goolkii Sergi Roberto ee kulankii taariikhda galay ee PSG, laakiin hal gool ayaa noqday mid laysu wada raacay oo cod aqlabiyad ah lagu meel mariyay.
goolkii uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda Getafe intii lagu jiray xili ciyaareedkii 2005/2006 kii ayaa loo doortay goolka taariikhda kooxda Barcelona ee abid ugu fiican waxayna jamaahiirta Barcelona goolkan u garteen in uu yahay gool ayna jirin goolal la tartami karaa.
Lionel Messi ayaa ciyaartoy aad ubadan oo kooxda Getafe ah waxa uu ku ceebeeyay goolka uu taariikhda ku galay isaga oo min khadka dhexe ilaa goolhayaha dhulka dhigay wuxuuna kadib Lionel Messi jamaahiirta kooxdiisa goolkan u codeeyay uu hawada u mariyay fariin mahad celin ah.
Barcelona ayaa hore abaal marin khaas ah ugu diyaarisay xidiga ku guulaysta goolkii taariikhda kooxdeeda ugu fiicnaa wuxuuna noqday Lionel Messi xidiga abaal marintan ka gudoomay kooxdiisa isaga oo waliba markii uu gudoomiyay abaal marintan fariin u diray jamaahiirtii u codaysay.
Waxaa finalkii goolka taariikhda Barcelona ugu fiican iskugu soo hadhay laba gool oo uu Lionel Messi dhaliyay iyada oo goolkii finalkii Copa Del Rey ee 2015 kii uu ka dhaliyay Athletic Bilbao uu noqday mid boqolkiiba 28% helay halka goolka uu abaal marinta ugu guulaystay ee kulankii Getafe uu helay boqolkiiba 45% laakiin markii labadooda codka loo qaaday waxaa si buuxda loo doortay goolkii Getafe uu Messi ka dhaliyay.
Fariim muuqaal ah oo la soo dhigay barta twitterka Barcelona ayuu Lionel Messi fariinta ugu gudbiyay taageerayaasha kooxdiisa wuxuuna sida aad halka hoose ka arki karto ku yidhi: “Waxaan doonayaa in aan u mahad celiyo qof kasta oo goolkayga ugu codeeyay kii ugu fiicnaa. Waad ku mahadsan tihiin hadiyada.
6:29 PM – Mar 28, 2019
Haddaba halkan ka daawo muuqaalka goolka loo doortay kii taariikhda Barcelona abid ugu fiicnaa ee uu Lionel Messi abaal marinteeda ku guulaystay: